रवि किन यति धेरै चर्चित छन् ? किन यति धेरैको समर्थन छ उनलाई ? यस्तो छ गुदी कुरो » Nepali Mato
यो समय रवि र उनी सँग जोडीएका कुराहरुले निकै तातिरहेको छ । एउटा टेलिभिजनमा कार्यक्रम चलाउने प्रस्तोताको यति विधि चर्चा भएको सायद नेपाली सञ्चारको लागी पहिलो घटना होला ।
अनलाईन मिडिया,युउटुव तथा सामाजिक सञ्जालहरुमा आफ्नो तर्क दिने र विचार राख्नेहरुको पछिल्लो हट विषय भनेको रवि,युवराज,अस्मिता र सालिकराम । लगभग जनमत अत्यधिक रवि तिर रहे पनि कतिपयहरुले रविको समेत विरोध गरेका छन भने अर्को पक्ष छ कानुनलाई निश्पक्ष रुपमा काम गर्न दिनु पर्छ भन्ने ।
कुनै चर्चित नेताको भन्दा धेरै समर्थन उर्लेर रविको पक्षमा नारा लगाइरहदा कतिपयलाई लाग्न सक्छ किन रविलाई मानिसहरु यसरी साथ दिइरहेका छन ? किन उनी यतिविधि चर्चित छन ? यो प्रश्न धेरैको मनमा उठ्न सक्छ ।
रवि मिडियामा अहिले चर्चित भए पनि यो क्षेत्रमा सुरुवात भने निकै पहिला देखि गरेको कुरा सबैलाई जगजाहेरनै छ । रेडियोबाट सुरु भएको उनको यात्रा अहिले टेलिभिजन सम्म आइपुगेको छ ।
त्यति रविको नाम पहिला कसैले चिन्दैनथे जब सबै भन्दा लामो टक सो चलाएर विश्व किर्तिमान कायम गरे त्यस पछि रवि एका एक चर्चामा आउन थाले । अहिले पनि लामो टक सो सञ्चालन गर्ने प्रस्तोतमा उनकै नाम विश्वक किर्तिमानमा रहेको छ । त्यस पछि ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाल टेलिभिजनमा सिधा कुरा प्रधानमन्त्री सँग कार्यक्रम सञ्चालन गरे पछि रविको उचाइ झन थपियो । जनताका गुनालाई उनले कार्यक्रममा समेट्न थाले पछि सबैको ताली पाउन थाले ।
ओली प्रधानमन्त्रीबाट परिर्वतन भइ दाहाल प्रधानमन्त्री भए पछि रविलाई विनाकुनै जानकारी सो चर्चित कार्यक्रम सिधाकुरा प्रधानमन्धी सँगबाट हटाइयो र नयाँ प्रस्तोता ल्याइयो । त्यस पछि रविले आफ्नो यात्रालाई नयाँ मोड दिए । सिधाकुरा जनतासँगबाट ।
न्युज २४ टेलिभिजनमा प्रशारण प्रारम्भ भएको सो कार्यक्रमले यति चर्चा पायोकी रातारात रवि हिट भए त्यति मात्र होइन बैदेशिक रोजगार,भ्रष्टचार र आम मानिस सँगको सरोकारको विषयमा उनको टिम खरो उत्रियो ।
सामाजिक सञ्जालमा उनको कार्यक्रम र उनलाई समर्थन गर्दै सयौं ग्रुप बने सयौै पेज बने उनको कार्यक्रम झन भन्दा झन लोकप्रिय बन्दै गए । गरिव,दुखि र पिडामा परेकाहरु प्रहरीकोमा भन्दा रविकोमा जान थाले । उनको टिमले धेरै अलपत्र नेपालीहरुलाई विदेशबाट उद्धार गरेका छ भने धेरैको आँसु समेत पुछेका छन ।
यसरी जनताको सरोकार राख्ने विषयमा खरो उत्रे पछि रवि एकाएक चर्चित बन्न पुगे । उनको टिमले गरेको राम्रा कामकै कारण अहिले लाखौं मान्छे रविको पक्षमा बोलिरहेका छन ।
‘बिरामी श्रीमान मरे मपनि मर्छु’ भनेकि महिलाको श्रीमानको मृत्यु भएको ३ दिनपछि मृत्यु
१४ श्रावण २०७६, मंगलवार ११:४४ July 30, 2019 Nepali Mato
भागेर बाचेकी बालीकाको दर्दनाक अबस्था हेर्नुहोस पुरै भिडियो
८ जेष्ठ २०७६, बुधबार ०७:१६ May 22, 2019 Nepali Mato
२४ असार २०७६, मंगलवार १९:२८ July 9, 2019 Nepali Mato
६ श्रावण २०७६, सोमबार १२:१२ July 22, 2019 Nepali Mato
४ असार २०७६, बुधबार ०७:३८ June 19, 2019 Nepali Mato